Umhlali waseMontauk Lighthouse: INDLELA uJoe Gaviola ayibuyise ngayo indawo yokugcina abagcini bokukhanya ngexesha lokutshixa - Uyilo Lokuphefumlela
Gcina Ikhaya Lakho Lingenabala
Umhlali waseMontauk Lighthouse: INDLELA uJoe Gaviola ayibuyise ngayo indawo yokugcina abagcini bokukhanya ngexesha lokutshixa
Ekuphindeni kwenziwe amakhaya anamhlanje, UJason Biondo, Umsunguli osekwe eMontanauk waseHammerhead Construction, uwele umgca weMason-Dixon ukubuyisa amaplanga athe abuya emva kweminyaka yoo-1800. Ezi ntsika ze-antique (zihlala zisetyenziswa njengeengubo) zingathengisa ngeedola ezingama-20 ukuya kwi-50 ngeenyawo. Kwaye okwangoku, kwiprojekthi kwindawo esempuma yeLong Island, iBiondo wayifumana simahla.
Le ndlu ilikhaya lomgcini wegumbi lokukhanya laseMontanauk, isakhiwo esingumqondiso owafumana iwonga njengeMbali yeSizwe yeMbali ngo-2012. Ugunyaziswe yiNkongolo yesiBini, phantsi kukaMongameli uGeorge Washington, ulwakhiwo lwango-1796 yayililighthouse yokuqala kwiNew York State. Iindawo zokuhlala zabagcini zikumgangatho wesibini wesakhiwo esiqhotyoshelwe kwindlu yokukhanya uqobo, ngaphezulu kwemyuziyam kunye nevenkile yezipho.
Kutyelelo lwam lokuqala kunye nokuphela kwendawo yokugcina abagcini, kwi-2018, ndandikwisabelo njenge intatheli ezizimeleyo ye INew York Times. Ke, umhlali waye UMarge Winski , owayehlala apho amashumi amathathu eminyaka kunye noluhlu lwezinja zaseNewfoundland ezazinobunzima ngaphezu kwam. Ithuba lokundwendwela kwam yayisisigqibo sakhe sokufudukela eMaine, apho wayehlala khona, ngokufanelekileyo, kwindlu enombono wendlu yokukhanya.
Umlandeli kaMarge ngumgcini webhanki kunye nelungu lebhodi lendlu ende yexesha elide uJoseph Gaviola. Indima yakhe njengomgcini, njengeMarge's, iyaphambuka kwindima yomgcini wegumbi lokukhanya. Endaweni yokujonga uphondo lokukhanya kunye nenkungu, esele yenziwe yi-US Coast Guard ukusukela phakathi kwiminyaka ye-1980, uGaviola ubukho kwipropathi.
Izinto ezigabadeleyo zenzeka kwindlu yesibane yaseMontauk, njengoko uJoe ebeka. Iiyure ezimbini kwimpuma yehamlet apho mna noJoe sikhulele khona, isizukulwana okanye ezimbini ngokwahlukeneyo, imozulu imbi kakhulu. Ukubetha komoya, hayi impempe. Kwezi ntsuku, isandi sokuntywila kwemvula sikhatshwa sisandi sokwakha. Zimbini iiprojekthi eziqhubekayo zangaphandle: a ukuhla oko kubandakanya ukususwa nokubuyiselwa kwamatye eentoni ezintlanu kunye neetoni ezilishumi ukukhusela indlu yokukhanya ukusuka kukhukuliseko lolwandle, kwaye okwesibini okunika inqaba yendlu yokukhanya ukuphakanyiswa kobuso okuphakanyisiweyo .
Umsebenzi wangaphakathi kwikota yomgcini wagqitywa ngaphambi kokuba uGaviola ahambe ngokupheleleyo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Xa sithethile emva koko, eyona njongo yakhe yayikukukwenza indawo ethe kratya yeesuti zakhe. Abantu basekuhlaleni bathandabuza ukufaneleka kwakhe kwimeko enjalo emxinwa, yokuzahlula efihlwe njengeyona intle kangaka. Uhlala apho nangoku kwaye onwabile, enesiporho esibizwa ngokuba nguAbhigali.
Ngokuqinisekileyo yayikho into eyayibambekayo apha, utsho, ngokuhlala apho ngexesha lobhubhane. Ngokuqinisekileyo kunjalo, ukuba ndedwa.
UGaviola, onomsebenzi wosuku kwezemali, uhlala apho yedwa kulo lonke ubhubhane; kodwa ebenazo iindwendwe. Indawo epakiweyo ekufuphi epakini yabona iindwendwe ezili-1,421,690 ngonyaka we-2020 ngokwe-Ofisi yoRhulumente wePaki, ezoLonwabo kunye neMbali yoLondolozo lwaseNew York.
Okwangoku, indawo yokuhlala ephawulekayo iye yaba yi-ofisi yasekhaya yexesha lika-bhubhane. Idesika yeBiondo eyakhiwe eludongeni yenziwe ngemiqadi emidala efumaneka kwindawo yokugcina izinto. Iindonga zimhlophe kwaye imiqadi imdaka, yenza ikhandlela ecocekileyo yokukhanya kwendalo kwimeko eyiyo yolwandle. Akukho magama kumbono.
Ngobuchwephesha kunye nokubhala ngokufihlakeleyo sonke sinikwe amandla okwenza nantoni na ekhaya, utshilo uGaviola. Sasinemisebenzi embalwa ukusuka kukhuphiswano lwasekhaya kwezona ofisi zingcono ekhaya kwaye andizukubeka eyam.
Inkqubo yesicwangciso somgangatho wasimahla
Ngexesha lokwakha kokuqala, uGaviola wazifumana elele kumandlalo womoya ongaphantsi, iisuti zakhe zebhanki zixhomekeke kumbhobho wesilingi wobhedu. I-Biondo ichaza inkqubo, ebonakala ngathi iinxalenye ezilinganayo zokubuyiselwa kunye nokuhlaziywa, njengezinto ezingakhiyo.
Ndingumakhi wesizukulwana sesibini, kwaye andazi ukuba kwenzeka ntoni kwii-70s kunye nee-80s kodwa bona, yayiyicic ukugubungela nje zonke izinto ezintle, utshilo uBiondo. Inxalenye enkulu yokuba ngumakhi ngoku kukususa nje loo maleko asukela kwiminyaka yama-70s nama-80s, kwaye ubhengeza nje okungaphantsi phaya.
Balumkisa umembi wezinto zakudala xa emba, uBiondo kunye neqela lakhe basebenzise iiper bars kunye nezando zokukhanya ukuze bafumane iinkcukacha eziyilwe kudala. Ngaphantsi kwamanqanaba amathathu e-linoleum kwakukho amaplanga amxinwa eDouglas fir amachaphaza amnyama okutshisa isitovu. Emva kwepaneli kunye nodaka kwakumi izitena ezili-1860.
Ngokungafaniyo nohlaziyo lwaselwandle lwango-1980, wangena ngebrashi yocingo endaweni yesando. Wayengazi ukuba yintoni na engaphaya komaleko wetshe de wayibona. Iziphumo zazibandakanya indawo yokubasa izitena yesibini kunye netshimini eyayigqunyiwe.
Ukuba ujonge kuloo miqadi ngo-1985, uya kuba ngathi, 'Wowu, mdala, masibeke ifomica, utshilo. Ngoku, ngenxa ye-HGTV kwaye abantu bayayiqonda ukuba intle kakhulu, siyazi ukuba unobuncwane obufihliweyo kwezo ntlobo zezehlo.
Ngaba ufuna amakhaya amahle ngakumbi? Sinezinto ezininzi. Masikhe sihlale phezu kwabo kunye.
Xa sele kuvulwe, kwakungekho nto ingako inokwenziwa kwiindonga nakwimigangatho; Baye bagqitywa, bagcinwa ngokupheleleyo, uyachaza. Imiqadi ebonakalisiweyo ibonakala ngathi yingqumba yomthi kunye nom-oki, nganye kuzo ethi yona iBiondo ithi yayininzi kuloo ndawo ngexesha kwakhiwa indlu yokukhanya. Imigangatho nguDouglas Fir kunye nokukhula okudala, kubonisa iipateni zokutya okuziinkozo ezingasekhoyo, utshilo uBiondo. U-Gaviola uthelekisa iinkozo ne-zebra eprintiweyo.
UTodor Tsvetkov UTodor Tsvetkov
Kule mihla, xa uthenga iDouglas Fir, onke loo maplanga ayagaywa asuka kwiifama zemithi, ngenxa yoko imithi ayide ivuthwe, utshilo uBiondo. Ujonge lo mthi apho, iinkuni ngokwazo zineenkulungwane ubudala, ngubani owaziyo ukuba wawumdala kangakanani umthi ababefumene kuwo.
Izixhobo zale mihla ezixutywe neziqwenga zembali zibonisa indawo yokuhlala efunda njengemyuziyam. Itafile yasekhitshini ephezulu ngumnyango uGaviola noBiondo abafunyenwe ngelixa bekhangela i-attic. Izinto ezihonjisiweyo zibandakanya izinto zakudala ezinje ngemigodlo kunye ne-tiller evela kwidory esetyenziselwa ukuhlangulwa kwenqanawa kunye nezibane ezahlukeneyo kwimali mboleko evela kuNxweme.
Ukusuka kwimbono yoyilo, uBiondo uthi, Xa unezinto ezindala, izinto ozifunileyo, amaplanga e-antique, izitena ze-antique, emva koko uyikhupha ekhitshini elitsha kraca, oko kukubaleka ekhaya.
qesha umququzeleli oqeqeshiweyo
Ukufota Todor Tsvetkov
Landela iNdlu entle I-Instagram .
Indlu yebhilididi yabantu
izimvo zesofa emnyama yegumbi lokuhlala
Uyilo olulula lwempompo